Akhriso: Warsaxaafadeed Ka Soo baxay Somaliland Oo Ku Aadan Shirka Brussels Iyo Tukaraq – Goobjoog News
Warsaxaafadeed ka soo baxay Madaxtooyada Somaliland ayaa looga hadlay Shirka ka socda magaalada Brussels ee looga hadlayo arrimaha siyaasadda Soomaaliya, amniga iyo dhaqaalaha.
Waxaa lagu sheegay warsaxaafadeedka ka soo baxay Somaliland in shirkaasi uusan khuseynin ugana duwaneyn shirarkii hore uga dhacay Muqdisho iyo Garoowe.
Somalilnad waxay sidoo kale ka hadashay xaaladda deegaanka Tukaraq waxayna tilmaantay in ay waddo waanwaan lagu qaboojinayo colaadda mudada ka jirta degmada Tukaraq oo ay isku hor fadhiyaan ciidamado kala taabacsan Somaliland iyo Puntland.
Haddaba halkan ka Akhriso Warsaxaafadeedka ka soo baxay Madaxtooyada Somaliland.
Akhriso: Tirada Dadka Ay Ku Dileen Ciidamada Kenya Gobolka Gedo